Ikhamera yeWorn-Worn Camera: Amaqhinga aza kunceda ezibhedlela | Izisombululo ze-OMG
Kwihlabathi liphela, abantu bangena esibhedlele mihla le njengamaxhoba okudutyulwa, ukubiwa, ukubethwa, kunye neemfuno zonyango ezinxulumene nobundlobongela. Uninzi lwamkelwe ngononophelo lwexesha elifutshane okanye elide. Kwiindawo ezinabantu abaninzi, ubundlobongela asiyonto ingalindelekanga. Ngamanye amaxesha abaguli baphethwe kakubi ngabasebenzi, amagosa aphezulu akhwaza ngejuniors okanye abanye abantu abangahambelaniyo nabangena ezibhedlele kwaye bedala ubundlobongela.
Ngokophando olwenziwe yi-International Association yoKhuseleko lwezeMpilo kunye noKhuseleko (i-IAHSS), iphantse i-80% yezibhedlele zifuna ukufikelela kulawulo kunye nokuphuculwa kwe-CCTV. Abalawuli bezempilo kunye neengcali zokhuseleko kufuneka bafake izisombululo zokujonga ividiyo ezikhulayo ukukhusela abaguli, iindwendwe, abongikazi, amagqirha, kunye nabasebenzi ezibhedlele, iiofisi, amaziko okugcina abaguli, kunye namancedo okugcina ixesha elide.
Iikhamera ezinxibe umzimba ziye zaziswa ezibhedlele ukuphucula ukhuseleko kubasebenzi bezempilo. Iikhamera ziyilelwe ukuthumela umyalezo ocacileyo wokunganyamezeli kwaphela abo baxhaphaza okanye bahlasele abasebenzi esibhedlele.
Ezi zixhobo zibonelela ngokuphendula okukhulu kunxibelelwano phakathi kweqela leenqwelo yezigulana kunye nezigulana. Ii-paramedics zihlala zizibeka kwiimeko ezinzima nezinobungozi. Iikhamera zinceda ukulungelelanisa kunye noogxa bamapolisa ukuqinisekisa ukuba kuthathwa amanyathelo kulandela naziphi na izenzo zolwaphulo mthetho kubasebenzi. Iikhamera zomzimba zinceda apha ngokunikezela ngokungakhethiyo kunye nokukhuselekileyo ividiyo yophando lweziganeko ezihlangane kumgca wangaphambili. Umboniso wevidiyo ugcinwa kwikhadi le-SD elikhuselekileyo elinokuthi kamva lisetyenziswe njengobungqina obuvumayo enkundleni.
Izinto ezirekhodiweyo ezivela kwezi khamera zingasetyenziselwa ukuqeqesha kunye noqeqesho, kunye nokunceda kwiinkqubo zonyango ezifanelekileyo. Amaqela eenqwelo zezigulana anganakho ukuxhamla ngokufanayo ngokujonga ukurekhodwa ukuphucula impendulo yabo kwiimeko kunye nokufumana ingxelo yenyani yangempela yokunceda ukwenza izigqibo ezisindisa ubomi. Iikhamera zinokusetyenziselwa njengoqeqesho lokukhwela abasebenzi abatsha kwaye ubabonise iinkqubo ezizodwa kunye nendlela yokuphendula kubo.
I-Paramedics ijongene nokuxhatshazwa ngamazwi nangokwasemzimbeni ngelixa isemsebenzini, kwaye ezi khamera ziluncedo ekufumaneni abo bantu. Iikhamera ezinxibe umzimba ziyinto ethandwayo ekukhetheni abasebenzi. Abasebenzi be-Paramedic banikezela ngobomi babo ekukhuseleni nasekunyamekeleni abantu ngexesha labo lokufumana imfuno enkulu kwaye nayiphi na into kubo ukuba babe phantsi kwengqumbo okanye ubundlobongela ayilunganga kwaphela.
Imiceli mngeni ejongene nezibhedlele
Ukubonelela ngokhuseleko olungcono kwizigulana, iindwendwe kunye nabasebenzi
Ukuhambelana nemiyalelo yaseburhulumenteni kunye neerhente zokhuseleko
Ukukhusela kwizimangalo zobuxoki kunye nokutshutshiswa
Ukoyisa uxinzelelo lohlahlo-lwabiwo mali
Ukudibanisa ukulawulwa kokufikelela kunye neenkqubo zophando zevidiyo
Iimveliso zekhamera ezinxibe umzimba ze-OMG
Isakhelo esisempilweni, esisebenza ngokuphezulu ukugcina kuzo zonke izixhobo
Phila ukulandela umkhondo ngenkqubo ye-GPS eyakhelwe-ngaphakathi
Ukugcinwa kwekhadi lememori le-SD
Jonga okwenziwe nge4G
Umbhalo ubhalwe ngokufihlakeleyo kwaye awunakuhlelwa
Indawo esezantsi igcinwa kwiintsuku ze-31 ngaphandle kokuba kwenziwe isicelo sokuyigcina ixesha elide
Sinikezela ngesixhobo, inzwa, umkhondo, ukujonga-umnxeba, ubuchwepheshe obungenazingcingo kunye nezixhobo zokulandela umkhondo zekhaya kunye nokusetyenziswa kwazo koochwephesha.
Iikhamera zomzimba zinokubanakho ukuphucula ukusebenza kunye nokwoneliseka kwiindidi zemisebenzi eyahlukeneyo. Kwimeko yokufunda nabasebenzi bezokhuseleko, umzekelo, iikhamera zibonakalise ukuba zinokuthomalalisa amalungu oluntu anengcwangu. Oku kuye kwaphucula ulwaneliseko lomsebenzi ngokwenza abasebenzi bazive bekhuselekile emsebenzini. Emva kovavanyo kwiiwadi zempilo yengqondo, urhulumente ufuna ukuba abezonyango basebenzise iikhamera. Kwi-2014, ukusetyenziswa kweekhamera ezinxibe umzimba ngabahlengikazi kwavavanywa okokuqala kwiiwadi ezimbini eBroadmoor, isibhedlele sabagula ngengqondo esiphezulu eCrowthorne, eBerkshire. Imifanekiso ebonisa ubungqina bokuxhasa ukutshutshiswa kulandela iziganeko zobundlobongela apho kunye nokunciphisa okuncinci kweziganeko zokuhlaselwa kwabasebenzi kwaqatshelwa. Ngapha koko, kwabakho "ukwehla okubonakalayo kokungaziphathi kakuhle kunye nokuziphatha okukhohlakeleyo", ngokutsho kwesithethi seWest London NHS Trust, eqhuba iBroadmoor.
UJim Tighe, ingcali yolawulo lokhuseleko lwasekhaya eWest London NHS Trust, uthi iikhamera zenze abasebenzi bazithemba ngakumbi. "Siye sasebenzisa i-showage kwizihlandlo ezimbalwa zokuphononongwa kweziganeko ezinobungozi kwaye kube luncedo kakhulu ukubona ngokucacileyo nokuva okwenzekileyo. Kunganceda ukwehlisa ubude bexesha lophando olwenzileyo kuba unamangqina azimeleyo, utshilo.
Ngapha koko, amandla okusasaza bukhoma kwiikhamera avumela ogqirha ukuba bangekho kwindawo enika iingcebiso ngonyango kubathungi abahamba ngeemeko ezinzima xa benyanzelekile.
Izibhedlele zahlukile kwimiceli mngeni yezokhuseleko ngokukodwa kwimizi-mveliso ethile edityaniswe yintlangano enye. Ukongeza kwiindawo ngokubanzi, izibhedlele zihlala zineevenkile, iivenkile zezipho, iikhemesti, ezibambe iiseli zonyango lwamabanjwa kunye neendawo zonyango lwengqondo-zonke zibonisa iimfuno zobuchwephesha ezizodwa. Izixhobo zokukhusela ukuthotyelwa komthetho ze-OMG ziza kuluhlu olubanzi ukuzalisekisa ezi mfuno zahlukeneyo. Ukurekhodwa kwevidiyo, ulawulo lokufikelela, ii-alamu, iikhamera ezinxibe umzimba, kunye nezinye izixhobo zinokuhanjiswa kwaye zidityaniswe kunye kwinkqubo yokhuseleko esibhedlele.
Izixhobo zethu ziyafumaneka kwimarike kukhuseleko lwezibhedlele nakwamanye amasebe
Ukuqwalaselwa kweVenkile yeLizwi yokuPhononongwa kweLizwi
IQumrhu Eliqhenqileyo Elilawulayo (Ulawulo Lobungqina Bokudibanisa)
Ikhamera yeWIFI encinci / iGPS / 3G / 4G Yomzimba Ozelweyo
Ikhamera yeSigqeba seMoto esilungileyo kunye ne-Encryption [Akukho isikrini seLCD] (BWC059)
Ikhamera yeWall Worn, Ugcino lwangaphandle-Ikhadi le-SD 32GB-128GB (BWC043)
IiYure ezinde [16 Hrs] Ukurekhoda iKhamera yomzimba-yeWorn (BWC061)
Ikhamera yeSigqeba seMoto esilungileyo kunye ne-Encryption [Nge-Screen LCD] (BWC060)
Ikhamera ye CCD (BWC054)
Ikhamera ye-Mini Worn Camera-Ukucinezelwa kwevidiyo ephezulu (BWC058)
Ikhamera ye-Headset ye-Headset ye-Head Worn (BWC056)
Efihliweyo i-Spy Camera (Ukhuseleko lwaseKhaya)
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukukhuseleka okunokuza kunye netekhnoloji enjalo. Amalungu oluntu ngokubanzi avumile ukuba ayazixhalabisa malunga nokuba umntu ongagunyaziswanga, umntu wesithathu unokufumana ukufikelela kulwazi lwabo lobuqu ngokusebenzisa iikhamera ezigugileyo zomzimba. Bakwabonakalise inkxalabo yokuba oku kungakhokelela njani kucalucalulo lwexa elizayo ngenxa yokuvela kwengcaciso yabo. Uninzi lwamagqirha aluvumelani nokuba iikhamera zomzimba ziya kubuphazamisa ubudlelwane begqirha nesigulana kodwa banexhala malunga nokhuseleko lolwazi lwezigulana zabo. Nangona kunjalo, uluntu kunye noogqirha babekhetha ukumiliselwa kwenkqubo yekhamera enxibe umzimba, ukuvavanya ukuba izibonelelo ezinokubakho zingaphezulu kobungozi obunokubakho. Uninzi loluntu lukholelwa ekubeni abasemagunyeni kufuneka babe nokufikelela ngokupheleleyo kwidatha ngelixa abasebenzi abongikazi, oosokhemesti, abasebenzi baselebhu, kunye nabanye abaqeqeshi bezempilo kufuneka babe nokufikelela okungaphelelanga.
Anon., Nd IXESHA. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.salientsys.com/industries/hospitals-healthcare/
ISebe lezonyango elebhu, A., 2018 Feb. I-NCBI ishicilelwe.gov. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29331259
DeSilva, D., nd Tyhila. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.revealmedia.co.uk/5-ways-body-cameras-could-help-ambulance-staff
Is Hardy S, Bennett L, Rosen P, Carroll S, White P, Palmer-Hill S, (2017. [Kwi-Intanethi]
UMeyi, TT, FEB 1, 2019, Amaxesha. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.straitstimes.com/singapore/health/body-worn-cameras-for-scdf-paramedics
Morris, A., Meyi 30, 2019. Ukuchaza kunye neenkwenkwezi. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.expressandstar.com/news/health/2019/05/30/ambulance-staff-to-wear-body-cameras-as-40pc-of-paramedics-attacked/
IMulholland, H., Wed 1 ngoMeyi 2019. XHASA I-GUARDIAN. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.theguardian.com/society/2019/may/01/body-cameras-protect-hospital-staff-patients-violence-mental-health-wards
Ikhamera eWorn-Worn Camera: Amaqhinga aza kunceda ezibhedlela gqibela ukuguqulwa: Julayi 29th, 2020 by admin
4927 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje